Odeeffannoowwan Yuutuubii irratti gadhiifaman amanuu keenyaan dura gaafilee kunneen of yaa gaafannu. – ኢትዮጵያ ቼክ
Odeeffannoowwan Yuutuubii irratti gadhiifaman amanuu keenyaan dura gaafilee kunneen of yaa gaafannu.
Torbeewwan sadi dura dhaabbileen hojii odeeffannoo mirkaneessuu hojjetan 80 ta’an ‘laafummaa dhaabbatni Yuutuubii gama odeeffannoowwan dogongoraa ittisuutiin agarsiisaa jiru’ ilaalchisee dhaabbatichaaf xalayaa barreessaniiru.
Dhaabbileen kunneen Yuutuubiin namoota odeeffannoowwan sobaafii dogongoraa tamsaasaniif akkasumas kunneen yaadawwan dhugummaan isaanii hin mirkanoofne tarkaanfachiisaniif iddoo mijataa ta’ee itti fufuusaa himan.
Kunis akka isaan yaaddesse eeran.
“Namootni dhuunfaafii dhaabbileen itti gaafatamummaa hinqabne fayyadamtoota /Yuutuubii/ irratti dhiibbaa akka taasisan, akka ijaaramanfii maallaqa akka sassaaban heeyyameera” jechuunis qeeqan.
Biyya keenya keessattis keessattuu yeroo dhiyootii as chaanaaliiwwan Yuutuubii heddu banamuun odeeffannoo, xiinxala, gaafif deebii akkasumas qabiyyeewwan biro yeroo tamsaasan mul’ata.
Qabiyyeewwan chaanaaliiwwan Yuutuubii kunneen tamsaasanis namoota kuma dhibbaan lakka’amaniin yeroo daawwataman taajjabneerra.
Kunis Yuutuubiin namoota hedduuf madda odeeffannoo ijoo akka ta’e kan agarsiisudha.
Baay’achuun chaanaaliiwwan Yuutuubii heddumina yaadaaf waan dansaa ta’ullee facaatii odeeffannoowwan sobaafii dogongoraaf haala mijataa uumuu kan danda’udha.
Kanaafis odeeffannoowwan toora Yuutuubii irratti tamsa’an amanuufii qooduu keenyaan dura gaafiiwwan kunneen of gaafachuu barbaachisa:
• Chaanaaliin Yuutuubii odeeffannoowwan galaalchitoota/gabaastota mataa isaatiin hojjetaman /Original story/ ni dhiyeessaa?
• Chaanaalichi odeeffannoowwan dhiyeessuuf maddoota amanamoofii beekamoo ta’an ni eeraa?
• Odeeffannoowwan dhiyaatan keessatti duudhaaleen gaazexeessummaa akka sirrummaa, madaalawaa ta’uu, hirmaachisummaafii kkf ni mul’atuu?
• Chaanaalichi dogongorawwan raawwatuuf tarkaanfilee sirreeffamaa ifaafii hatattamaa ni fudhataa?
• Teessoon chaanaalichaafii eenyummaan qopheessitootaa ni beekamaa?
Deebiin gaafiiwwan kunneenii harka caalmaan ‘lakki/miti’ kan jedhu yoo ta’e chaanaaliin Yuutuubii hordofaa jirru odeeffannoo sobaafii dogongoraaf nu saaxiluu waan danda’uuf dhimmicha haalaan qalbeeffachuufii maloota odeeffannoo itti argannu kanbiraa barbaaduun nurra jira.